Sida Maraykanka Looga Shaqeeyo Waxa jira waxyaabo dhawr ah oo ku saabsan sida looga shaqeeyo Maraykanka oo laga yaabo inay ka duwan yihiin sida looga shaqeeyo wadamada kale waxana laga yaabaa in waxyaabaha qaarkood isku mid yihiin. Cadooyinka meesha aad ka shaqeysid waxay ku xidhnaan doonaan nooca shaqada ee aad haysatid. Waxa muhiim ah inaad taqaanid sida loola shaqeeyo dadka jooga goobtaada shaqada iyo inaad taqaanid waxa lagaa filayo.
Wax ka baro sababta uu wakhtigu muhiim ugu yahay goobta shaqada, muhimadda uu Ingiriisigu ka leeyahay shaqada, waxa loo soo xidho shaqada, xidhiidhyada lala yeesho dadka kula shaqeeya, iyo xuquuqdaada iyo waajibaadkaaga. Sida Maraykanka Looga Shaqeeyo
Ma ku fikiraysaa inaad furatid ganacsi?
Bilaabista ganacsi waa go’aan weyn. Haddii aanad waligaa hadda ka hor yeelan ganacsi, waxa laga yaabaa in aanad ka warqadin dhamaan waxyaabaha lagaa rabo inaad sameysid si aad u bilawdid ganacsigaaga. Qorsheyn taxadir leh iyo daraasad ayaa hagaajin doona suurtogalkaaga guul. Qorsheynta Ganacsi